Vondrona Eoropeanina : Nanome 13,5 tapitrisa Euros an’i Madagasikara -
AccueilRaharaham-pirenenaVondrona Eoropeanina : Nanome 13,5 tapitrisa Euros an’i Madagasikara
19/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tontosa omaly, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ny dinika politika andiany fahenina, hiarahan’i Madagasikara amin’ny vondrona eoropeanina. Ny Filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny masoivohon’ny Vondrona Eoropeanina eto amintsika, Benedito Sanchez, no nitarika izany notronin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta notarihin’ny praiminisitra sy ireo olo-manan-kaja ambony isan-tsokajiny avy.
Anisan’ny goavana tamin’izany ny namoahan’ny Vondrona Eoropeanina ny ampahan’ny voalohany amin’ny programam-panohanana ara-bola ho an’ny taona 2017-2018, izay tafiditra indrindra amin’ny « Contrat d’appui à la consolidation des services de l’Etat à Madagascar » faharoa (SBC2) mitentina 13,5 tapitrisa Euros. Marihina fa ao anatin’ny famatsiana ny fandaharan’asa 11è FED, izay mizara roa isan-taona izay mitentina 30 tapitrisa Euros, ary tafiditra amin’ny Programme Indicatif National (PIN) izay nosoniavin’i Madagasikara sy ny Vondrona eoropeanina mitentina 518 tapitrisa Euros. Efa nisy ny fandrotsahana ny ampahany mitentina 65 tapitrisa Euros, ny taona 2014, ary taorian’izany, ny volana desambra 2015, nisy indray ny fandrotsahana 11,5 tapitrisa Euros.
Raha ny fanazavana, dia nifototra tamin’ny fametrahana ny fahamarinan-toeran’ny toekarem-pirenena ary manatratra ny tanjona ara-politika sy sosialy ny tetikasa. Teo ihany koa ny ady amin’ny kolikoly, izay nametrahana ny Pole anti-corruption, araka ny lalàna. Manaraka izany, ny fametrahana ny lalàna amin’ny fanenjehana ny fananan’olona azo tamin’ny fomba tsy ara-dalàna, sns.
Ankoatra izay, dia nanambara ny masoivohon’ny Vondrona Eoropeanina fa vonona hatrany hanatanteraka ireo tetikasa hiarahana amin’i Madagasikara izy ireo. Na izany aza anefa, dia nanambara, tetsy an-kilany, ny Filoha Hery Rajaonarimampianina fa misy ny fitarazoan’ny paikady rehetra amin’ny famoaham-bola eo anivon’ny vondrona Eoropeanina.
Tsy hay intsony izay manjo ny orinasa Madarail ankehitriny. Fantatra mantsy, araka ny fanadihadiana natao, fa mikorosy fahana tanteraka ity orinasa misahana ny fitaterana an-dalamby ity amin’izao fotoana izao. Tsy misy vola miditra mihitsy noho ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Manomboka eny ifotony ny fisandratana
Depioten’ny « fanovana » : Mba migrevy ve ny zanakareo?
Hery Rajaonarimampianina : MPITONDRA MANAIKY AN’ANDRIAMANITRA !